December 22, 2020 - Khitalin Media
“ဖုန်းစခရင် အလင်းဆုံးထိ တင်သုံးတဲ့ အမျိုးသမီ ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ် မျက်စိဝေဒနာ”
December 22, 2020 by Khitalin Media
တရုတ်နိုင်ငံက ချန်းဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦးဟာ စမတ်ဖုန်းကို အလွန်အကြူးအသုံးပြမိတာကြောင့် ဖြစ်ရပ်ဆိုးတခုနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ သတင်းလေးက ပျံ့နှံ့လို့နေပါတယ်။ချန်းကတော့ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် အသက်မွေးလုပ်ကိုင်နေ သူဖြစ်တာကြောင့် အလုပ်နဲ့ပတ်သတ် တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျတွေကို အချိန်မီပြန်လည် ဖြေကြားနိုင်ဖို့အတွက် ဖုန်းကို အချိန်တိုင်းအသုံးပြုနေရသူတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာတော့ ချန်းဟာ နေရောင်ထဲမှာပါ ဖုန်းအသုံးပြနိုင်ဖို့အတွက် သူမရဲ့ဖုန်းအလင်းရောင်ကို အဆုံးထိတင်သုံးမိခဲ့ရာ ကနေ ကြာလာတဲ့အခါမှာ သူမရဲ့မျက်လုံးတွေက အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ နေ့ဘက်သုံးရင်လည်း ဖုန်းအလင်းကအဆုံး ညဘက်အသုံးပြုရင်လည်း ဖုန်းအလင်းရောင်က အဆုံးတင်ပြီး သုံးမိခဲ့တဲ့ချန်းကတော့ အိမ်ရာ ထတဲ့ အချိန်တွေမှာ သူမရဲ့မျက်လုံး တွေက ရဲပြီး မြင်ကွင်းတွေကေဝဝါးလာခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါပေမယ့် ချန်းဟာ ဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူးဆိုပြီး မျက်စင်းတွေကိုပဲအသုံးပြုခဲ့တာကြောင့် သူမရဲ့မျက်လုံဟာ တဖြေးဖြေးအခြေအနေဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ဆေးရုံကိုသွားပြီး စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ သူမရဲ့မျက်လုံးထဲကသွေးကြောတွေဟာ ခဲနေပြီး ဘယ်လက်မျက်ကြည်လွှာထဲမှာ … Read more
ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ အသည်းနှလုံးကို ခြွင်းချက်မရှိ ဖမ်းစားနိုင်ပြီး အိမ်ထောင်ရေးသုခ ပြည့်ဝအောင် ဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက် အမျိုးသမီးတို့ သိထားသင့်တဲ့ လိုအပ်ချက်လေးတွေ အိမ်ထောင်ရေးသုခ ပြည့်ဝတဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခု ဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက် အမျိုးသမီးတို့ သိထားသင့်တဲ့ လိုအပ်ချက်လေးတွေ မိန်းကလေးတို့ တတ်မြောက်ထားရမယ့် ပညာရပ်တွေထဲမှာ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ အတူနေချိန် အိပ်ယာထဲမှာ ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်အောင်နေတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အိမ်ထောင်ပြုမယ့် မိန်းကလေးတွေပေါ့။ ကိုယ့်ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ အသည်းနှလုံးတစ်ခုလုံးကို ခြွင်းချက်မရှိ ဖမ်းစားနိုင်ပြီး အိမ်ထောင်ရေးသုခ ပြည့်ဝတဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခု ဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက် အမျိုးသမီးတို့ သိထားသင့်တဲ့ လိုအပ်ချက်လေးတွေအကြောင်း ပြောပြပေးမယ်နော်။ လှပတဲ့ အတွင်းခံလေးတွေ ကိုယ်လုံးအလှကို ပိုပြီး လှပအောင် ထောက်ပံ့ပေးမယ့် အတွင်းခံလေးတွေ လိုအပ်ပါတယ် အတွင်းခံလှလှလေးတွေ၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အရောင်လေးတွေ၊ ကိုယ်လုံးအလှကို … Read more
အိမ်ရှင် ကျောင်းဆရာမရဲ့ ယောက်ျား နှင့် ရုပ်ချောလှတဲ့ အိမ်ဖော်မ ဇာတ်လမ်း မိန်းမ ဖြစ်သူက ကျောင်းဆရာမ ဖြစ်တော့ တာဝန်ကျရာ နယ်မြေဒေသမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်။ အိမ်မှာ ယောက်ျားတစ်ယောက်ပဲကျန်ခဲ့တယ်။ သားသမီးက မရှိ စားဖို့ သောက်ဖို့ ချက်ပြုတ်ဖို့ကပြသနာ မကြီးလှပေမယ့် အဝတ်လျှော် နဲ့ အိမ်သန့်ရှင်းရေး က ပြသနာရှိလာတော့ ယောက်ျားဖြစ်သူကအိမ်ဖော်တစ်ယောက်ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုပြီး အိမ်ဖော်ခေါ်ထားလိုက်တယ်။ တာဝန်ကျရာ မြို့မှ ကျောင်းပိတ်ရက်အိမ်ကို ပြန်ရောက် လာသော အခါ သူ့ယောက်ျားကို မိန်းမဖြစ်သူ ဆရာမက ” ရှင့် အိမ်ဖော်ကလည်း ချောလှချည်လား ကိုမိုးကြီးရဲ့ ” ယောက်ျားဖြစ်သူ ကိုမိုးကြီးက ပြန်ပြောတယ် ” ချောလား မချောလား မသိပါဘူးကွာ အဝတ်လျှော် ထမင်း ချက်တတ်ရင် ပြီးတာဘဲ … Read more
သင် နေ့စဉ်​ရက်​ဆက်​ချောင်းဆိုးနေ ပါသလား? ဒီဆေးနည်း သုံးကြည့်လိုက် ပါ
သင် နေ့စဉ်​ရက်​ဆက်​ချောင်းဆိုးနေ ပါသလား? ဒီဆေးနည်း သုံးကြည့်လိုက် ပါ ငရုတ်ကောင်း နဲ့ ပျားရည်​တော့ ရှိဖို့လိုအပ်​ပါလိမ့်​မယ်​။ ပထမဦးစွာ ငရုတ်ကောင်း ​ငါး​စေ့ ​ခြောက်​​စေ့​လောက်​ကို အမှုန့်ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ​​​ပြီးရင်​ ၎င်းအမှုန့်​ နဲ့ ပျားရည် လက်ဖက်ရည်​ဇွန်း တစ်ဇွန်းစာ​လောက်​ ရောသမ​မွှေပြီး လျှက်ပေးရမှာပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ အ ဓိကအ​နေနဲ့ ကျ​နော်​​ပြောချင်​တာက ​ဆေးလျှက်​ပြီး နာရီဝက်အတွင်း ရေလုံးဝမသောက်ရပါဘူး။ သိပ်​မကြာခင်​အချိန်​​လေးမှာပဲ ​နေ့စဉ်​ရက်​ဆက်​ဆိုး​နေရတဲ့​ချောင်း ယူပစ်​သလို​ပျောက်​ကင်းသွားပါလိမ့်​မယ်​။ Credit Unicode သငျ နစေ့ဉျ​ရကျ​ဆကျ​ခြောငျးဆိုးနေ ပါသလား? ဒီဆေးနညျး သုံးကွညျ့လိုကျ ပါ ငရုတျကောငျး နဲ့ ပြားရညျ​တော့ ရှိဖို့လိုအပျ​ပါလိမျ့​မယျ​။ ပထမဦးစှာ ငရုတျကောငျး ​ငါး​စေ့ ​ခွောကျ​​စေ့​လောကျ​ကို အမှုနျ့ပွုလုပျရမှာဖွဈပါတယျ။ ​​​ပွီးရငျ​ ၎င်းငျးအမှုနျ့​ နဲ့ ပြားရညျ လကျဖကျရညျ​ဇှနျး တဈဇှနျးစာ​လောကျ​ … Read more
ခုပဲ သင့်ရဲ့ညာလက်ဖဝါး ကို ဖြန့်ကြည့်လိုက်ရအောင် နံပါတ် ဘယ်လောက်လဲ..?
ခုပဲ သင့်ရဲ့ညာလက်ဖဝါး ကို ဖြန့်ကြည့်လိုက်ရအောင် နံပါတ် ဘယ်လောက်လဲ..? ခု ပဲ ညာလက်ဖဝါးနဲ့ အဖြေရှာရအောင် ကိုယ့်ရဲ့လက်ဖဝါးကို ကြည့်ပြီး ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာကို ကြည့်ရအောင်နော် … (၁) ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားသောသူ၊ ခေါင်းမာသောသူ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားပြီး ပညာရှင်တစ်ယောက်ကို လေးစားအားကိုးခံရမည့်သူပါ။ မမှားကိုနည်းအောင် ကြိုးစားနိုင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက အမြဲတမ်း မှန်ကန်နေမှာပါ …။ ဒါပင်မဲ့ နည်းနည်းခေါင်းမာသူဖြစ်ပြီး အများအတွက်ထက် ကိုယ့်အတွက်ကို ကြည့်ပြီး အလုပ်လုပ်တတ်သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အတွက်ထက် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကိုလည်း စဉ်းစားတတ်ပါစေ …။ (၂) ရိုးသားပြီး ယုံကြည်ရသောသူ၊ လူစိမ်းကို ယုံလွယ်သောသူ ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိပြီး လူတွေအပေါ် ရိုးရိုးသားသား ဆက်ဆံနိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပင်မဲ့ လူတွေကို သိပ်ယုံလွန်းရင်လည်း မကောင်းပါ …။ (၃) ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိသူ၊ တစ်ယောက်တည်းနေရလည်း … Read more
ချစ်သူရည်းစားရှိသူတိုင်းဖတ်ရန် ခုခေတ်မှာ ရည်းစားထားဖို့က ထမင်းစား ရေသောက် သလောက် သိပ်လွယ်ကူလွန်းပါတယ်။ ရေရှည်တည်မြဲအောင် ထိန်းသိမ်းသွား ဖို့ရယ် နှစ်ဖက်စလုံးက သစ္စာစောင့် သိတတ်ဖို့ ရယ်ကမှခက်တာ။ ထစ်ခနဲရှိ ပြတ်ပြီ ဆိုတဲ့ စကား မပြောမိဖို့ရယ် စစ်မရောက်ခင် မြှားကုန် လမ်းခွဲ မသွားဖို့ ရယ်ကမှ ခက်တာ။ အတူချမှတ် ထားတဲ့ Plan တွေ မေ့မသွားဖို့ရယ် ပေးပြီးသား ကတိ ဖောက်ဖျက် မသွားဖို့ ရယ်ကမှ ခက်တာ။ အခု Propose လုပ် အခုချက်ချင်း ချစ်သူ ရည်းစားတွေဖြစ် တစ်ပတ် တစ်လမကြာဘူး ကွဲကြတဲ့ ခေတ်မှာ ကိုယ့်အတွက်နဲ့ နှစ်ရှည်လများ မျက်ရည် ကျပေးတဲ့ချစ်သူ ကို တန်ဖိုးထားပါ။ InaRelationships … Read more
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၇ ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ်တာ ဟောစာတမ်း
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၇ ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ်တာ ဟောစာတမ်း (၇) ရက်သားသမီးအပေါင်း တစ်ပတ်တာအတွင်းမှာ ပြုလုပ်ရမဲ့ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် အချက်များ ၊ပြုလုပ်ရမည့်ယတြာများ တွက်ချက် ဟောကြားပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာ၍ လိုအင်ဆန္ဒများပြည့်ဝကြပါစေ။ တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ရန်များတာ စကားများတာမျိုးတွေ ရွှေနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ ကြုံတတ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတွေရဲ့ ကူညီမှုနဲ့လဲ လုပ်ငန်း ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စ စာရင်းဇယားကိစ္စ ပစ္စည်းများနဲ့ ပက်သက်တာများ လုပ်ကိုင်ရတတ်ပါတယ်။လူမျိုးခြား ဘာသာခြား နိုင်ငံခြားသားများနှင့် ပက်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံလေးတွေ ကြုံရလိမ့်မယ်။ အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်။ငွေကြေးကိစ္စများ အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ရွှေ ငွေနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ စကား ပြောရပါလိမ့်မယ်။ပြောဆို အောင်မြင်မှုတွေတော့ မကြာခင်ရရှိပါတော့မယ်။စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်အရောင်းအဝယ်ကောင်းလာပါမယ်။ချစ်သူ အိမ်ထောင်ဖက်နှင့် စပ်တူလုပ်ငန်းများ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ပါက အဆင်ပြေ အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ ထီကံစမ်းပါ။ဒူးနာ ခါးနာတာတွေ … Read more
ဆံပင်တွေပါးလွှာပြီး ပျက်စီးသူများ အတွက် ဆံပင်အုံပို ထူစေမယ့် နည်းလမ်းများ
ဆံပင်တွေပါးလွှာပြီး ပျက်စီးသူများ အတွက် ဆံပင်အုံပို ထူစေမယ့် နည်းလမ်းများ ဆံပင် ဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေလိုပဲ အထူးဂရုစိုက်မှု လိုအပ်ပါတယ်။ ဆံ ပင်ေ တွပါးလွှာပြီး ပျက်စီးသူများအတွက် ဆံပင်ကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေဖို့ နည်းလမ်းလေးတွေ ဖော်ပြပေးလိုက်မယ်နော်။ (၁) ကြက် ဥ ၊ဒိန်ချဉ်တို့ဖြင့် ပေါင်းတင်ပါ ဥတွေမှာ ပရိုတိန်း၊ ဘိုင်အိုတင်းနှင့် ဗီတာမင် B11 တို့ ကြွယ်ဝတာကြောင့် ပါးလွှာပြီး အဆြီ ပန် တဲ့ဆံပင်ကို သန်စွမ်းစေပါတယ်။ ကြက်ဥကို ဂရိဒိန်ချဉ်နှင့် ရောပါ။ဆံပင်မှာလိမ်းပြီး တစ်နာရီေ လာက်ထားပါ။ ပြီးမှ ခေါင်းလျှာ်ပေးပါ (၂) gelatin အမှုန့်ကို essential oil နှင့်ရောပါ gelatin အမှုန့်မှာ ပရိုတင်းဓါတ်များစွာ ပါရှိပါတယ်။ ခွက် … Read more